HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Oromo Pangasinan Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tiv Tseky Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Misy andinin-teny maro be miresaka fa ho avy i Kristy mba hitsara ny olombelona eto an-tany. * Hoy, ohatra, ny Matio 25:31-33:
“Rehefa tonga ny Zanak’olona [Jesosy Kristy] amin’ny voninahiny, miaraka amin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany be voninahitra izy. Dia hangonina eo anatrehany ny firenena rehetra. Ary hanavaka ny olona izy, toy ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy. Ary hametraka ny ondry eo ankavanany izy, fa ny osy eo ankaviany.”
Anisan’ny zavatra hitranga amin’ny “fahoriana lehibe” izany fitsarana ny ondry sy ny osy izany. Hifarana amin’ny ady Hara-magedona ilay fahoriana lehibe, ary tsy mbola nisy fahoriana hoatran’io mihitsy teo amin’ny tantaran’olombelona. (Matio 24:21; Apokalypsy 16:16) Ny fahavalon’i Kristy no lazaina hoe osy eo amin’io fanoharana io, ary “hiharan’ny sazy vokatry ny didim-pitsarana” izy ireo, “dia fandringanana mandrakizay.” (2 Tesalonianina 1:9; Apokalypsy 19:11, 15) Ny olona tsy mivadika aminy kosa no ondry, ary hahazo “fiainana mandrakizay” izy ireo.—Matio 25:46.
Rahoviana no ho avy i Kristy?
Hoy i Jesosy: “Tsy misy mahalala ny amin’izany andro sy ora izany.” (Matio 24:36, 42; 25:13) Nilaza “famantarana” maro hita maso anefa izy mba hahalalana hoe efa ho avy izy.—Matio 24:3, 7-14; Lioka 21:10, 11.
Olombelona nofo sy ra ve i Kristy rehefa ho avy sa fanahy?
Fanahy i Jesosy rehefa ho avy, fa tsy olombelona, satria fanahy izy rehefa natsangana tamin’ny maty. (1 Korintianina 15:45; 1 Petera 3:18) Izany no antony nitenenany tamin’ireo apostoliny, talohan’ny nahafatesany, hoe: “Kely sisa dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao.”—Jaona 14:19.
Hevi-diso momba ny fiavian’i Kristy
Hevi-diso: Rehefa milaza ny Baiboly hoe ‘ho avy ao amin’ny rahon’ny lanitra’ i Jesosy, dia midika fa ho hitan’ny olona rehetra izy rehefa ho avy.—Matio 24:30.
Ny tena marina: Matetika no ampifandraisin’ny Baiboly amin’ny zavatra tsy hita maso ny rahona. (Levitikosy 16:2; Nomery 11:25; Deoteronomia 33:26) Nilaza tamin’i Mosesy, ohatra, Andriamanitra hoe: “Hankeo aminao ao anaty rahona mainty aho.” (Eksodosy 19:9) Tsy hoe nahita mivantana an’Andriamanitra i Mosesy tamin’izay. Mitovy amin’izany koa ilay hoe ‘ho avy ao amin’ny rahon’ny lanitra’ i Kristy. Tsy hoe mahita azy mivantana ny olona, fa mahafantatra fotsiny hoe tonga izy.
Hevi-diso: Ara-bakiteny ilay resahin’ny Apokalypsy 1:7 hoe rehefa tonga i Kristy dia “hahita azy ny maso rehetra.”
Ny tena marina: Tsy voatery ho ara-bakiteny ny teny grika hoe “maso” sy ny hoe ‘mahita’, ao amin’ny Baiboly. Matetika izy ireo no midika hoe mahatakatra na mahafantatra. * (Matio 13:15; Lioka 19:42; Romanina 15:21; Efesianina 1:18) Milaza ny Baiboly fa “mitoetra ao amin’ny hazavana tsy hay hatonina” i Jesosy rehefa natsangana ka “tsy misy olona mahajery azy.” (1 Timoty 6:16) Ilay hoe “hahita azy ny maso rehetra” àry, dia midika fa ho fantatry ny olona rehetra hoe mampihatra ny didim-pitsaran’Andriamanitra i Jesosy.—Matio 24:30.
Hevi-diso: Olombelona nofo sy ra i Jesosy rehefa ho avy, raha jerena ny 2 Jaona 7.
Ny tena marina: Hoy ilay andininy: “Maro mantsy ny mpamitaka efa eo amin’izao tontolo izao, dia olona tsy manaiky fa tonga tamin’ny nofo i Jesosy Kristy.”
Maro ny olona tamin’ny andron’ny apostoly Jaona no tsy nino hoe olombelona nofo sy ra i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany. Nantsoina hoe Gnostika ireny olona ireny. Mba hanaporofoana àry fa diso izany hevitra izany, dia nosoratana ny 2 Jaona 7.
^ feh. 3 Maro ny olona mampiasa an’ilay teny hoe “fiaviana fanindroany” na “fiverenan’i” Kristy. Tsy hita ao amin’ny Baiboly anefa ireo teny ireo.
^ feh. 14 Jereo ny Diksioneran’ny Testamenta Vaovao Grika-Anglisy nataon’i Thayer (1981), pejy 451 sy 470.